သင်္ကြန် အားလပ်ရက် မှာ ဘယ်ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်တွေ သွားသင့်လဲ ?? - CantWait2Say
Myanmar New April 7, 2018
မြန်မာတို့ရဲ့အတာ ရိုးရာသင်္ကြန်မှာ ခရီးသွားမယ့်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ခရီးစဉ်တွေ ကို ချက်ကျလက်ကျ ကပ်တိုးလေးပြောပြမယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မှာတည်ရှိတဲ့ အင်းလေးအိုင်ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးမားဆုံး ရေကန်အိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်အကျယ်အဝန်းဟာဆိုရင် ၄၄.၉ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဗင်းနစ်မြို့လို့ တင်စားလို့ရတဲ့ အင်းလေးအိုင်ဟာ တောင်တန်းကြီးတွေ ဘေးပတ်ချာလည် ကာရံထားတဲ့ အတွက် နိုင်ငံခြားသားများကပါ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လှည်းဝင်ရိုးသံ တစ်ညံညံ ပုဂံဘုရားပေါင်း ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဘုရားစေတီ ပုထိုးပေါင်းများစွာ တည်ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့လေး ပုဂံ ဟာ သိပ်ကို သာယာလှပတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ပုဂံ ရှေးဟောင်း ဘုရားတွေဖူးရင်း ညနေခင်း နေဝင်ဆည်းဆာအလှကို တစ်ဝကြီး ကြည့်ရှုခံစားလို့လည်းရပါသေးတယ်။
သီပေါမြို့ ဆိုတာ နာမည်ကျော် ဂုတ်ထိပ် တံတားကြီးနဲ့ တွဲဖက်မြင်ရလောက်အောင် ထူးခြားဆန်းပြားပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ ရှမ်းမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပူပူနွေးနွေး ရှမ်းရိုးရာအစားအသောက်တွေရယ် ပျု ငှာဖော်ရွေလှတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတို့ရဲ့ဓလေ့တွေကြောင့် သွားရောက် လှည်ပတ်ကြည့်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းစိမ်းရေလေးသောက်ပြီး သဲဖြူဖြူ ဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့ ရေဆော့ကစားလို့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကမ်းခြေကတော့ ငပလီကမ်းခြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ ငပလီကမ်းခြေကို နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေကတော့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ နီပယ်မြို့လို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ်။
ရှေးဟောင်းမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ နဲ့ ရခိုင်ဘုရားပုထိုးစေတီတော်တွေ များစွာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကြန်တွင်း မြောက်ဦးမြို့နယ် ရောက်ခဲ့ရင် ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာသနပ်ခါး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကိုပါ ဆင်နွှဲလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲ…. ဒီတော့ သင်္ကြန်တွင်းခရီးသွားမယ့်သူတွေ အတွက် လက်တို့မန်းရှင်းခေါ်ပေးလိုက်ကြပါဦး ..
#pMk(Can’t Wait To Say)
မွနျမာတို့ရဲ့အတာ ရိုးရာသင်ျကွနျမှာ ခရီးသှားမယျ့သူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈမယျ့ ခရီးစဉျတှေ ကို ခကျြကလြကျကြ ကပျတိုးလေးပွောပွမယျ။
ရှမျးပွညျနယျ ညောငျရှမွေို့နယျ မှာတညျရှိတဲ့ အငျးလေးအိုငျဟာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ဒုတိယအကွီးမားဆုံး ရကေနျအိုငျဖွဈပါတယျ။ အိုငျအကယျြအဝနျးဟာဆိုရငျ ၄၄.၉ စတုရနျးမိုငျပေါငျး ရှိပါတယျ။ မွနျမာပွညျရဲ့ ဗငျးနဈမွို့လို့ တငျစားလို့ရတဲ့ အငျးလေးအိုငျဟာ တောငျတနျးကွီးတှေ ဘေးပတျခြာလညျ ကာရံထားတဲ့ အတှကျ နိုငျငံခွားသားမြားကပါ လာရောကျလညျပတျတဲ့ နရောတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
လှညျးဝငျရိုးသံ တဈညံညံ ပုဂံဘုရားပေါငျး ဆိုတဲ့ အတိုငျး ဘုရားစတေီ ပုထိုးပေါငျးမြားစှာ တညျရှိတဲ့ ရှေးဟောငျးမွို့လေး ပုဂံ ဟာ သိပျကို သာယာလှပတဲ့နရောလေးတဈခုပါ။ ပုဂံ ရှေးဟောငျး ဘုရားတှဖေူးရငျး ညနခေငျး နဝေငျဆညျးဆာအလှကို တဈဝကွီး ကွညျ့ရှုခံစားလို့လညျးရပါသေးတယျ။
သီပေါမွို့ ဆိုတာ နာမညျကြျော ဂုတျထိပျ တံတားကွီးနဲ့ တှဲဖကျမွငျရလောကျအောငျ ထူးခွားဆနျးပွားပွီး အေးခမျြးလှတဲ့ ရှမျးမွို့လေးတဈမွို့ဖွဈပါတယျ။ ပူပူနှေးနှေး ရှမျးရိုးရာအစားအသောကျတှရေယျ ပြု ငှာဖျောရှလှေတဲ့ ရှမျးလူမြိုးတို့ရဲ့ဓလတှေ့ကွေောငျ့ သှားရောကျ လှညျပတျကွညျ့သငျ့တဲ့နရောတဈခုဖွဈပါတယျ။
အုနျးစိမျးရလေေးသောကျပွီး သဲဖွူဖွူ ဖှေးဖှေးလေးတှနေဲ့ ရဆေော့ကစားလို့ရတဲ့မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တဈခုတညျးသော ကမျးခွကေတော့ ငပလီကမျးခွပေဲဖွဈပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျ သံတှဲမွို့နယျမှာတညျရှိတဲ့ ငပလီကမျးခွကေို နိုငျငံခွားသား ခရီးသှားတှကေတော့ အီတလီနိုငျငံရဲ့ နီပယျမွို့လို့တောငျ တငျစားထားကွပါတယျ။
ရှေးဟောငျးမွို့တျောတဈခုဖွဈခဲ့တဲ့ မွောကျဦးမွို့ဟာ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျဦးမွို့နယျမှာ တညျရှိပါတယျ။ ထူးခွားတာကတော့ ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈတှေ နဲ့ ရခိုငျဘုရားပုထိုးစတေီတျောတှေ မြားစှာရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။သင်ျကွနျတှငျး မွောကျဦးမွို့နယျ ရောကျခဲ့ရငျ ရခိုငျလူမြိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာသနပျခါး သင်ျကွနျပှဲတျောကိုပါ ဆငျနှဲလို့ရနိုငျပါသေးတယျ။
ကဲ…. ဒီတော့ သင်ျကွနျတှငျးခရီးသှားမယျ့သူတှေ အတှကျ လကျတို့မနျးရှငျးချေါပေးလိုကျကွပါဦး ..
အုတ်ခဲပုံကြီးကို ရှိခိုးဦးချနေခြင်းမဟုတ် တစ်ခုချင်းစီ၏ အဓိပ္ပါယ် အကျဉ်းများမှာ – (၁) တံခွန်တိုင် = မာန ( ရတနာတော်မြတ် ၃ ပါးအား ဖူးမျှော်မာန်လျော့ ကန်တော့ရန်) (၂) ပန်းတင်ခုံ = ပတ္ထနာ – နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ဆုတောင်းရန် (၃) ရှစ်မြှောင့် …
ရန်ကုန်မှာ ဒီနှစ်အပီကဲမယ့်သူ တွေအတွက် Hot ဖြစ်နေတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ အကြောင်းကို ပြောချင်လွန်းလို့ စာဖတ်သူတွေကို ဖောက်သည်ချ လိုက်ပါတယ်။ ● Thingyan Music Festival (TMF) သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် TMF ဟာဆိုရင် DVBBS , …
မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အား ‘ဦးလေးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျာ’လို့ မေးတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်နှင့် အပြည့်အစုံ
‘ဦးလေးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျာ’လို့ အမေးခံခဲ့ရသည့် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်) မန္တလေးမြို့ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံပွဲ ပြုလုပ်ရာတွင် မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တစ်ယောက် ဦးလေးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ခင်ဗျာ လို့ အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ ထောက်ခံပွဲတွင် လူထုနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်အဖြစ် မြေကြီးပေါ်တွင် ထိုင်နေသော …